Bayaanka Nadwada 15aad Boosaaso: Ka Digtoonaada Baadinimada iyo Kufriga – Radio Daljir
Bayaanka Nadwada 15aad Boosaaso: Ka Digtoonaada Baadinimada iyo Kufriga
Abriil 21, 2017 4:34 b 0
Mahad oo dhan Allaah baa iska leh, nabadgelyo iyo naxariisi Nabi Maxamed korkiisa ha ahaato, Intaa kadib:
1- Culimada ka soo qaybgashay nadwada 15aad ee magaalada Boosaaso waxay ugu baaqayaan shacabka Soomaaliyeed in ay Rabbigood u soo wada noqdaan, ayna joojiyaan wax kasta oo Ilaahay ka caraysiinaya, isla markaasna ay shareecada islaamka si buuxda ugu dhaqmaan, hoggaanka siyaasada iyo hoggaanka dhaqankuna ay arrintaas hormuud ka noqdaan.
2- Shacabka Soomaaliyeed waa shacab 100% muslim ah, diyaarna u ah in diintooda la baro, wixii ka qaldanna loo saxo; sidaa darteed Jamaacooyinka ku andacoonaya in shucuubta caalamka islaamku riddoobeen, waxaan ugu baaqaynaa inay Ilaahay ka baqaan oo ay joojiyaan marinhabaabinta ummadda, hadday khayr doon yihiinna ay awooddooda galiyaan sidii bulshada diinteeda loo bari lahaa, wixii ka qaldanna loogu sixi lahaa, ee aysan isku dhabarjabin inay dadka ka dhaadhiciyaan inay gaalo yihiin.
3- Markii aan si qotodheer u darisnay afkaarta iyo dhaqamada kooxda la magac-baxday maandoon waxaa noo caddaatay in aysan xurmaynayn Qur’aanka iyo Xadiiska nabigeena midna, ayna caqligooda iyo afkaarta gaalada diin ka dhigteen; sidaa darteed waxaan ugu baaqaynaa dadweynaha soomaaliyeed inay ka digtoonaadaan baadinimada iyo kufriga ay ku faafinayaan baraha bulshadu ku xiriirto (Social media). Dhalinyarada aqoonyahanka ahna waxaan ugu baaqaynaa inay afka iyo qalinkaba kula diriraan ilaa ay xerada diinta ku soo celiyaan ama ay sharkooda ummadda ka aamusiyaan.
4- Annaga oo ka ambaqaadayna aayadaha Qur’aanka ah iyo axaadiista nabigeena صلى الله عليه وسلم waxaan dadweynaha Soomaaliyeed ugu baaqaynaa inay ilaaliyaan walaalnimada iyo midnimada , ayna ka dheeraadaan wax kasta oo dhaawacaya xiriirkooda walaalnimo, sida: qabyaalada, dulmiga iwm.
5- Waxaan ugu baaqaynaa guud ahaan bulshada soomaaliyeed iyo maamulkaba inay ilaaliyaan deegaanka oo saamayn toos ah ku leh nolosha dadkeena iyo duunyadeenaba, lagana sameeyo cilmi-baarisyo faahfaahsan iyo wacyigalin joogto ah, si looga badbaado masiibooyinka ka dhalan kara baabi’inta deegaanka bad iyo berriba.
6- Umadda jiritaankeeda iyo awoodeeduba waxay ku jiraan ilaalinta akhlaaqda islaamka iyo dhaqankii wanaagsanaa ee soo jireenka u ahaa soomaalida, waxaan ka digaynaa burburka akhlaaqeed ee ku lammaan aaladaha netka iyo filimaanta afsoomaaliga loo turjumay, iyo waliba dhar-xirashada aan waafaqsanayn shareecada islaamka rag iyo dumarba.
7- Cadaaladda iyo Garsoorku waa tiirka ugu muhiimsan oo umaddi ku dhisnaan karto, sidaa awgeed waxaan ugu yeeraynaa umadda soomaaliyeed shacab iyo dawladba xaqiijinta iyo garab istaagga Garsoorka heer kasta (qofka, qoyska, qabiilka, maxkamadaha, maamulada).
Masawiro dheeri ah arag hoos iyo bogga xiga >>> PAGES 1, 2
Maqaalo Kale 268 Wararka 19752
Warka Duhurnimo iyo Xuseen Madar, Daljir Bossaso
Digniinta culimada: ka digtoonaada daalimiinta baaddilka, baadida iyo kufriga ku haya diinta Islaamka